Oku a bụ nke a kpọrọ site n'ọnụ kọmishọna steeti ahụ na-ahụ maka ịrụ, ichekwaba na imezigharị okporo ụzọ, bụ maazị Marcel Ifejiọfọr, dịka ọ gara ileta ka ọrụ si aga n'ụfọdụ okporo ụzọ gọọmenti etiti dị na steeti ahụ, bụ ndị a na-agba mbọ ime ka ha kwe ọgịga. Ụfọdụ n'ime okporo ụzọ ndị a gụnyere ụzọ awara awara ahụ si Enugu wee gaa Ọnịtsha, nke siri Amawbịa gaa Ụmụokpu wee pụta ebe e si abanya Ụmụnyà, nke si Nnewi gaa Amichi wee pụta Ekwulumili na ụfọdụ ndị ọzọ.
Okporo ụzọ ndị a niile bụkwa ebe a hụrụ ka a dọbasịrị ụfọdụ akụrụngwa e ji arụ ọrụ, ma ọ dịghị onye hụrụ ndị ji ya bụ ọrụ ngo anya, bụzị nke maazị Ifejiọfọr kọwara dịka nke jọgburu onwe ya na nke pụrụ iweta ọnọdụ kawanye njọ nyere ndị bi na mpaghara ahụ na ndị na-agba ya bụ okporo ụzọ. O mere ka a mara na ọ bụ n'ihi ụdị ihe ahụ ka gọọmenti steeti ahụ jiri wee ziga onye ọrụ ngo ka o mee ka ụzọ nke ahụ siri Amawbịa gaa Ụmụokpu kwere ọgịga ugbu a, bụkwa nke o kwuru na a ga-arụchapụ ya oge adịghị anya.
N'okwu dịkwa ka ibe ya, maazị Ifejiọfọr gakwara mgbaru n'ọrụ ibo ahụ siri Uke gaa Ideanị na Nnobi, bụ nke gọọmenti steeti ahụ na-arụ, iji wee mara ka ọrụ siri wee gbata kwụrụ n'ebe ahụ. Ọ garukwara n'ebe ahụ a mbize Ngene Okuazụ na-eme mkpamkpa iji hụ ka ihe si aga, ma kpọkuziekwa gọọmenti etiti ka o mee ngwa ngwa gbata ọsọ enyemaka aka ọkụ aka ọkụ n'ebe ndị a niile iji wee belata ajọ ọnọdụ okporo ụzọ na mbize na-ebi steeti ahụ aka ọjọọ n'ụzọ dị iche iche.